आजको राशिफल (२०७४ पौष १८ गते/२०१८ जनवरी ०२)
January 02, 2018 राशिफल
वि.सं. २०७४ पौष १८ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ जनवरी ०२ तारिख
पौष शुक्ल पूर्णिमा , आर्द्रा नक्षत्र, मिथुन राशिको चन्द्रमा, ऐन्द्र योग, बब र बालब करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : माघ स्नान प्रारम्भ, हनुमत्तीर्थ त्रिवेणी मेला (भक्तपुर), आर्य दिवस, चाँगुनारायण मेला, हैगुमिलापुह्नि (नेवारी पर्व)
राहु काल : दिउँसो ०२:४३ देखि ०४:०१ सम्म
यमघण्ट : बिहान ०९:३२ देखि १०:५० सम्म
गुलिक काल : दिउँसो १२:०८ देखि ०१:२५ सम्म
काल वारवेला : दिउँसो ०१:२५ देखि ०२:४३ सम्म
रोग वारवेला : बिहान ०६:५६ देखि ०८:१४ सम्म र साँझ ०४:०१ देखि ०७:०१ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो १०:५० देखि १२:०८ सम्म
उद्योग तथा व्यापारमा सामान्य फाइदा मिल्नेछ । सहयोगीहरूले हात झिक्नाले केही समस्या थपिने देखिन्छ । आर्जित धन तत्काल खर्च गर्नुपर्ला । पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्न सक्छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा असमझदारी बढ्न सक्छ । कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ । परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुःख पाइनेछ । सहयोगीहरूले हात झिक्नाले अलि अप्ठ्यारोमा परिनेछ । तर पराक्रम भावको चन्द्रमा भएकाले आफ्नै प्रयासले गरेका काममा भने लाभ मिल्नेछ । काममा चुनौती देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्ने योग छ । त्यसैले धैर्य र संयम भई अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
कर्म भावमा चन्द्रमा भए पनि धेरै आशावादी हुने दिन छैन । विभिन्न अवसर जुटे पनि अरूलाई वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ । नयाँ काममा हात हाल्नु हँदैन । धनव्यय र सञ्चित धनको नाश हुने सङ्केत छ । अवसरवादीहरूले फसाउने चेष्टा गर्नेछन् । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । अरूको विश्वासमा पर्दा अन्त्यमा धोका पाइएला । अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ । आत्मविश्वासको खाँचो हुनेछ, त्यसैले काम गर्नुअघि जान्नेबुझ्ने र अनुभवीको राय लिन सकेमा मिहिनेत र दौडधूप गरेको काममा सफलता प्राप्त भई छाड्ने छ । तर विशेष योजना गोप्य राख्नुहोला ।